Indawo entle yokuhlala / indawo yokugcina ibhayisekile ekhuselekileyo / ii-pubs ezikufutshane
Ifakwe kwindawo ezolileyo eReeth, eSwaledale, ligumbi lokulala elinomtsalane elikwi-Hill Close, kuMacala aphezulu. Eli gumbi limnandi leholide libekwe kakuhle kwaye linegaraji enkulu yokugcina iibhayisekile kunye nezinye izixhobo zangaphandle. Ngaphezu koko, eli fulethi likumganyana nje osuka kwindawo yelali ye-pubs, iikhefi, indawo yokutyela, i-ice cream parlour, iivenkile zezipho, iivenkile ezikoneni kunye neposi.
Nangona kukho abanye abahlali kwinduli ekufutshane le ndlu yodwa njengoko ingenabamelwane badibanayo kwicala elingasemva kweflethi njengoko ikwindawo esekona ehleli ngaphezulu kweegaraji ezintathu, enye iyeyaMacala aphezulu kwaye ezimbini zezammelwane. izindlu zangasese. Ukufikelela kwiflethi kukunyuka izinyuko zangaphandle ukuya kwiveranda efihlakeleyo. Ungena kwipaseji yokungena kwaye udlulela kwigumbi lokuhlala / lokutyela. Amagumbi amabini okulala afikeleleka ngaphandle kwegumbi lokuhlala elinesibini ukuya ngasekunene kunye nelinye ukuya ngasekhohlo. Ikhitshi likwangaphandle kwegumbi lokuhlala kwaye linobungakanani obuhle kunye nendawo enkulu yokugcina kunye nendawo yokusebenza.
Eli khaya leeholide lifudunyezwa ngeeheater zokugcina ebusuku kunye nokongezwa kombane, isiphumo somlilo wamalahle ngeengokuhlwa ezibandayo. Kukho indawo yokupaka yabucala yemoto enye kwi-drive enegumbi lemoto enye kwigaraji ekhuselekileyo ukuba unqwenela. Ukuqhubela phambili kwindawo yokupaka ezitalatweni inokufumaneka kufutshane ukuba uyafuna, oku kukwisiseko sokuza kuqala.
IReeth yilali ekhethekileyo kakhulu enelali emangalisayo eluhlaza ejikelezwe ziinduli zasekhaya ezinjengeFremington Edge kunye neCalver Hill. Kukho iivenkile zekofu ezintle ezifana ne-Overton Cafe, eyenza i-bacon sarnies emangalisayo kunye ne-White House eyenza ikofu emangalisayo kunye namaqebelengwane asanda kuxhaswa. Kukwakho indawo yokubhaka enkulu enikezela ngesonka esitsha iintsuku ezi-5 ngeveki kunye nekhefi ukonwabela isidlo sakusasa esimnandi. Kuphela umgama omfutshane wokuhamba enye ikhefi ethandwayo kunye neekeyiki e-Dales Bike Centre ... ujija iitapile zebhatyi ezinkulu onokuthi uzibone kwaye ngolwesihlanu iKeyiki yeShowstopper edume kakubi! Kukwakho ii-pubs ezi-4 kumgama wokuhamba ukhonza iiwayini ezintle kunye nee-ales zokwenyani!
IHigh Sides ivunyelwa nguHana ohlala eSwaledale kwaye esebenza...uyafowuna kuphela xa ufuna uncedo ngexesha lokuhlala kwakho.